Maxkamadda Gobolka Banaadir oo u fadhiisatay dhageysiga Dacwada kiiska marxuum Axmed Dowlo – Walaal24 Newss
Maxkamadda Gobalka Banaadir ayaa Maanta waxa u fadhiisatay Dhageysiga Dacwada loo heysto Eedeeysanayaal in ay ka dambeeyeen fal isugu jiray Dil iyo gubid loo geystay marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo ku magac dheeraa Axmed Dowlo.
Falkaas oo Sanadkii la soo dhaafay ee 2018 ka dhacay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, isla markaana loo geystay Marxuum Axmed Dowlo ayaa Maxkamadda Gobolka Banaadir waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen 7 qof oo isugu jira Rag iyo Dumar.
Fadhiga Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa waxaa Guddoominayay Garyaqaan Muuse Macallin Maxamed ee kana bilaabatay Dhageysiga Dacwada Eedeeysanayaasha ,waxaana weli si rasmi ah loo shaacin xiliga la soo gabagabeen doono Dhageysiga Kiiskaas.
Marxuum Axmed Dowlo oo ahaa Nin ka shaqeeyn jiray Garaash farsamada Baabuurta, kuna yaalla Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa fal arxan dara ahaa ku dilay dad isugu jiray Rag iyo Dumar, iyadoona loo dilay arrimo la xiriira Guur heybsooc ahaa.
Sawiro: Agaasime koofi oo Nairobi kula shiray Saraakiisha hay’adda socdaalka Adduunka IOM